श्रीलङ्कामा नाटकीय सत्ता समीकरण :नयाँ प्रधानमन्त्रीमा पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षे !::Hamrodamak.com
श्रीलङ्कामा नाटकीय सत्ता समीकरण :नयाँ प्रधानमन्त्रीमा पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षे !
कोलम्बो।श्रीलङ्कामा एक्कासी नाटकीय रुपमा बदलियको छ। सत्ता समीकरण श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको दल एकाएक सत्तारूढ गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ । यससँगै सत्ता समीकरणमा परिवर्तन भएको हो ।
शुक्रबार श्रीलङ्काका वरिष्ठ मन्त्री महिन्दा अमरावीराले भने, ‘राष्ट्रपतिको दल यूनाइटेड पिपुल्स फ्रिडम अलायन्स (यूपीएफए)ले गठबन्धन छोड्ने निर्णय भएको छ ।
समाचार अनुसार रनिल विक्रमसिंगेको ठाउँमा सिरिसेनाले पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको सपथ खुवाएका छन्। २०१५ को चुनावमा सिरिसेनाले राजापाक्षेलाई राष्ट्रपति चु्नावमा हराएका थिए ।